रोहिंग्या स्वदेश नफर्कनुमा बंगलादेश जिम्मेवार : म्यानमार – AP Khabar
रोहिंग्या स्वदेश नफर्कनुमा बंगलादेश जिम्मेवार : म्यानमार
७ भाद्र २०७६, शनिबार ०४:३७ 2019-08-24 एपी खबरLeaveaComment on रोहिंग्या स्वदेश नफर्कनुमा बंगलादेश जिम्मेवार : म्यानमार
भाद्र , ७ : रोहिंग्या शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने योजना शुक्रबार पनि असफल भएपछि म्यानमारले त्यसको दोष बंगलादेशलाई लगाएको छ । रोहिंग्या शरणार्थी स्वदेश फर्किन नमान्नुमा बंगलादेश नै जिम्मेवार भएको म्यानमारले आरोप लगाएको छ  । म्यानमारको सेनाले रखाइन राज्यमा हुँदा अमानवीय व्यवहार गरेकाले आफूहरू त्यहाँ बस्न नसकेर विस्थापित हुनुपरेको शरणार्थीले बताएका छन् । बिहीबार ३५ सय रोहिंग्यालाई स्वदेश फर्काउने तयारी भएको थियो । तर, असुरक्षा महसुस गर्दै अन्तिम समयमा शरणार्थी स्वदेश फर्किन अस्वीकार गरेका थिए । उता, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति नदिएकोले शरणार्थी फर्किन नमानेको बंगलादेशले म्यानमारमाथि आरोप लगाएको छ ।
के भन्यो म्यानमारले ?
स्वदेश फर्काउने रोहिंग्याबारे कागजपत्र बनाउने र प्रमाणीकरण फाराम त्रुटिपूर्ण भएको म्यानमारले आरोप लगाएको छ । विवादास्पद परिचयपत्रका कारणले शरणार्थीहरू फर्किन आनाकानी गरिरहेको उसले आरोप लगाएको छ ।‘बंगलादेशको विवादास्पद प्रक्रियाले शरणार्थी विश्वस्त हुन सकेका छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउन चीन र जापानलेसमेत सहजीकरण गरेको जनाएको छ ।
साढे सात लाख रोहिंग्या बंगलादेशमा
राष्ट्रसंघका अनुसार म्यानमारबाट विस्थापित सात लाख ४० हजार रोहिंग्या छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा शरण लिएका छन् । मुस्लिम र बौद्ध धर्मावलम्बीबीच धार्मिक र जातीय द्वन्द्वपछि उनीहरू विस्थापित भएका थिए । विस्थापितलाई बंगलादेशमा विभिन्न शिविर राखिएको छ । उनीहरू पिउने पानी, औषधिलगायत आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएको विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएका छन् । शिविरबाहिर आवतजावत गर्न उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
भएन सम्झौता पालना
शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने बारेमा सन् २०१७ मा दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको भन्दै शरणार्थीले सम्झौताअनुसार स्वदेश फर्किन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।पछिल्लोपटक गत बिहीबार तीन हजार पाँच सय शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दुवै देशका अधिकारीले बताएका थिए । तर, असुरक्षा महसुस गर्दै अन्तिम समयमा स्वदेश फर्किने निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।
न्युजिल्यान्डको एक गाउँमा किन बिरालोमाथि प्रतिबन्ध लाग्दै छ ?
१२ वर्ष जेठीसँग डेटिङमा हाकिमी
लुम्बिनीका कारण नजिकिँदै चीन
१० भाद्र २०७६, मंगलवार ०५:३८ 2019-08-27 एपी खबर
१८ भाद्र २०७६, बुधबार १०:४२ 2019-09-04 एपी खबर
गोलि हानेर भाग्दै गर्दा एक जना अपराधी पर्सा प्रहरीको नियन्त्रणमा
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार १७:५९ 2019-09-03 एपी खबर